वर्षा भए पनि सुरु भएन मनसुन - Himalayan Kangaroo
वर्षा भए पनि सुरु भएन मनसुन
Posted by Himalayan Kangaroo | २७ जेष्ठ २०७४, शनिबार ०२:११ |
काठमाडौं । देशभर शुक्रबार सामान्य वर्षा भए पनि मनसुन भने अझै सुरु हुन सकेको छैन । यसपहिले शुक्रबार अर्थात् जुन ९ तारिखमै नेपाली सीमा क्षेत्रमा मनसुन सक्रिय हुने अपेक्षा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गरेको थियो ।
शुक्रबार देशभर वर्षा त भएको छ तर यो मनसुनी वायुको प्रभावबाट भएको वर्षा होइन, जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक डा. ऋषिराम शर्माले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, नेपालमा अझै पश्चिमी वायुको प्रभाव कमजोर नभएका कारण मनसुनी वायुले प्रभाव जमाउन सकेको छैन । नेपालमा मनसुन सामान्यतया जुन १० देखि सुरु हुन्छ ।
उहाँले पश्चिमी वायु कमजोर भएपछि पूर्वी दिशाबाट मनसुनी वायु प्रवेश गर्ने जानकारी दिनुभयो । तर आज, भोलि नै त्यो वातावरण बनेको देखिँदैन, यस कारण मनसुनी वायु नेपाल प्रवेश गर्न अझै दुई÷तीन दिन लाग्न सक्ने देखिएको छ, उहाँले भन्नुभयो । पाँच दिनअघि बङ्गालको खाडीबाट उठेको मनसुनी वायु भुटानको आकाशमा रुमलिएर बसेपछि जुन १० मै नेपालमा मनसुन सक्रिय हुन्छ कि भन्ने सम्भावना टरेर गएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका मौसमविद् सुजन सुवेदीले भन्नुभयो, मनसुन सक्रिय भइनसकेकाले हामीले शुक्रबारबाट मनसुन घोषणा गर्न सकेनौँ ।
विभागका महानिर्देशक डा. शर्माले भुटानको आकाशमा रुमलिएको मनसुनी वायु नेपालतर्फ बहेपछि आइपुग्न भने धेरै समय नलाग्ने बताउनुभयो । शुक्रबार पश्चिम नेपालमा पश्चिमी वायुका कारणले धेरै ठाउँमा वर्षा भएको छ भने पूर्वी नेपालका पहाडी क्षेत्रमा समेत शुक्रबार दिनभर बदली भई अधिकांश ठाउँमा पानी परेको विभागले जानकारी दिएको छ । यस पटक नेपालको पश्चिमी वायुको प्रभावले पश्चिमी भेगमा निरन्तर वर्षा भइरहेको छ ।
Previousमधेसवादी दल कोही चुनाव जित्ने रणनीतिमा कोही बिथोल्ने तयारीमा
Nextनिःशुल्क सेवा लिन धाउँदाधाउँदै थला पर्छन् बिरामी
सबै भन्दा धेरै र कम मत कहाँ खसे ?
१ जेष्ठ २०७४, सोमबार ०२:०६
डरले रातभर सुत्दैनन् स्थानीय
११ असार २०७४, आईतवार ०१:४८
राजधानीमा बम आतंक,पोखरा र काभ्रेमा एनसेल टावरमा आगजनी
११ फाल्गुन २०७५, शनिबार ०१:५३
सुदूरपश्चिमका बन्द विमानस्थल कालोपत्रे गरिने
१० भाद्र २०७४, शनिबार ०१:१९